Afarta shaqooyinka aasaasiga ah ee taayirka mootada
Taayirada jiilaalka ayaa ku kaca barafka iyo barafka
Xagaagu waa imanayaa jiilaalkuna waa imanayaa. Maalmaha qaboobaha, Taayirada Ruiyi waxay soo bandhigtay taayirro badan oo taayir qabow: grandtrek sj8 iyo grandtrek sj6 oo loogu talagalay SUV, jiilaalka maxx02, jiilaalka Maxx iyo dsx-2 ee gawaarida rakaabka, si looga ilaaliyo macaamiisha safarka jiilaalka. Hada markaad b ...
Ogosto 25, 2017, Qingdao ruiyi mishiino soo saarista co., Ltd. ku guuleystay cinwaanka sharafta ah "Internet + hal-abuurnimo ganacsi sannadka 2017 ″.
Ogosto 25, 2017, Qingdao ruiyi mishiino soo saarista co., Ltd. ku guuleystay cinwaanka sharafta ah "Internet + hal-abuurnimo ganacsi sannadka 2017 ″. Ogosto 25, “Qingdao Internet + hal-abuurka shir-weynaha 2017 ″ oo ay martigelisay shabakadda wararka ee Qingdao ayaa lagu qabtay xafiiska caalamiga ah ...
Bishii Abriil 15, 2015, Qingdao ruiyi mashiinnada wax soo saarka co., Ltd. waxaa la gudoonsiiyay "Tobanka shirkadood ee ugu waawayn qaab dhismeedka xeebta galbeed xeebta cusub".
Bishii Abriil 15, 2015, Qingdao ruiyi mashiinnada wax soo saarka co., Ltd. waxaa la gudoonsiiyay "Tobanka shirkadood ee ugu waawayn qaab dhismeedka xeebta galbeed xeebta cusub". Shirkaddu waxay u hoggaansameysaa falsafadda shirkadda ee tayada marka hore, marka hore macaamilka, midba midka kale kaabaya oo abuuraya barwaaqo. Dib u eegista ...
Gawaarida Caster, PU Wheel, Shiinaha Mashiinka la taaban karo, Shiinaha PU Wheel, Shiinaha PU xumbo Wheel, Gawaarida Gawaarida Gawaarida,